Obude Journey By Electric Rubber - Jomo Technology Co., Ltd
Kuba khona ukuya kwindawo apho kuthatha ezintsha ethile kakhulu ukuba ume ngaphandle ngaphakathi kwindawo Rubber yombane; ongakhetha ezifana okungenisa elekhtrons kwaye in-wheel Motors. Ulawulo wireless kude banokugqalwa isuntswana kwinqanaba amandla kokuba eyenziwe ngeplastiki zakhiwe kwaye uvakalelwa kakuhle cheap. Ngokuqhelekileyo, loo mkhweli kwi Rubber yombane kukuba ukungakuhlawulisi ibhodi kwaye ukuqalisa ukusebenza osemendweni kunye nolawulo ekude ekwenzeni kwakhe ukulawula nokulawula isantya. Ukuze isantya akuyekanga ukutyhala 'umnyele phambili kwi kude Pilot. Kwiimeko ezinjalo, into kuphela ekufuneka ukuba ugqibile kukuba ukuya kwisikhundla ukuba babuthume phantsi kwaye uthintele ukuba angafumani ona fana na wena bawe. Yintoni eyenza ekhwele phezu kokuba crazier fun extra yinyaniso ukuba ungaya ummango kwaye longele ngaphandle ingxaki, ngoko uza kuba nako uhambo kunye nayo naphi na ufuna. Ukuba uphakamile lo KV, kokukhona akhawulezayo Rubber zombaneuya kuqhuba. Amavili kule Rubber sombane zenziwe ngerabha ezinokusetyenziswa na uhlobo elimi ngayo.
Kwaye kukho iintlobo elikhulayo skateboards zombane alwela isantya yabo (abathile baya kwenza kakuhle iikhilomitha ezingama-20 ngeyure nganye), ukukhawulezisa ekhawulezayo, kukho inani ngeendlela ukukhwela, kwaye sturdiness xa wabeka yi izantya zabo ngokupheleleyo okanye lihambile-esitratweni. Ngoko ke ukuba ngaba izinto zenziwe ngubani luhlala kuphela ilula, ngoko KOOWHEEL skateboards zombane uya kudibana neemfuno zakho. Ngoko ke, nokugcina engqondweni, siye waba nemincili ngokubanzi ukubona xa Koowheel yombane isizukulwana Rubber yesibini Kooboard uziqinisekisile phandle phaya phezulu. Lokuqala Rubber yombane ukuphumeza iimpawu ezininzi ukhuselo nokhuseleko ukuze umkhweli.
Eneneni, wagaleleka yinkqubo okungenisa endiwazuze ibhetri. Sicela Rubber zombanebokuhlela. Amashumi ezigidi abahambi ngeenyawo, a Rubber fun and ukhetho ubhalo ukunqumla imigama elide ngokukhawuleza ugcine kude yokuxakaniseka kwezithuthi gridlocked okanye izithuthi zikawonke zisilele azibi. Kodwa ke, kukho simo yonke zisasuka, yaye loo nto kanye kunjalo apha. Emva kokuchitha kufutshane iiyure 200 ephanda brand efanelekileyo onobuhle kwimarike, sathenga 10 iibhodi ephezulu emarikeni ekunene ngalo mzuzu kunye ehlola inkalo-by-icala ukuba ingxoke, isingasinge zeziphi ngokwenene ye-Rubber nezikhokelo bonke! Ukuba ufuna ukufumana umntu olungileyo, China na indawo ukuze ubone. Njengoko udweliso yi endaweni ukuthintela ukwenyuka okuyingozi okusenza, umkhweli kufuneka siqonde ukukwazi le bhodi angabonelela kufuneka ahlonitshwe ukusetyenziswa ezikhuselweyo. Noko ke, loo nto lonke ixesha isicwangciso elungileyo kakhulu ukuqinisekisa izikhokelo zomthonyama kunye nemimiselo malunga ekhwele ibhodi yakho ukuba uhambo nayo ze uvumele elininzi ixesha elongeziweyo yokhuseleko xa Uhambo kunye lwakho E-Rubber. Kuthatha emihlanu kuphela mane imizuzu ukuba buxabise ibhodi kunye kwitshaja msinya.